बिर्तामोडमा कपाल प्रत्यारोपण मेला
बिर्तामोड । झापाको बिर्तामोडमा सञ्चालित ‘एचडी हेयर एण्ड डर्मा केयर प्रालि’ले दोस्रो ‘कपाल प्रत्यारोपण मेला –२०७८’को आयोजना गरेको छ । असोज १५ गतेदेखि शुरु हुने कपाल प्रत्यारोपण मेला २४ गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
मेलाको अवसरमा विशेष छुटका साथ कपाल प्रत्यारोपण गरिने वरिष्ठ डर्मालोजिष्ट डा. गुरु पौडेलले बताए । “प्रत्यारोपण गर्ने भन्दा मानिसमा डर, त्रास उत्पन्न हुनसक्छ । तर हामीले गर्ने प्रत्यारोपण प्रविधि फरक छ । दुखाईरहित र शतप्रतिशत ग्यारेण्टीका साथ प्रत्यारोपण गर्ने छौँ” पौडेलले भने, “प्रत्यारोपण पछि ६ महिनासम्म निगरानीमा राख्छौँ । यो अवधिमा गरिने पुनः परीक्षण निःशुल्क उपलब्ध गराउने छौँ ।”
डा.पौडेलको नेतृत्व रहेको टोलीले कपाल प्रत्यारोपण गर्नेछ । एक वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा आएको एचडी हेयर एण्ड डर्मा केयर प्रालिले अहिलेसम्म ५० जना मानिसको सफल कपाल प्रत्यारोपण गरिसकेको डा. पैडेल बताउँछन् । प्रालिमा मुलुक भरबाट बिरामी आउने गरेका छन् ।
पाँच करोड रुपैयाँको लगानीमा सुरु गरिएको ‘हेयर एण्ड डर्मा केयरमा पछिल्लो समय कपाल प्रत्यारोपण गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको प्रालिको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रालिमा आफ्नै कपाल उखालेर आफैँले लगाउनसमेत मिल्ने प्रविधि रहेको छ । प्रविधि र प्राविधिक दुबै विषयलाई ध्यान पु¥याएर सेवा उपलब्ध गराउने प्रालिले जनाएको छ ।
प्रालिमा कपाल प्रत्यारोपणसँगै छालाको रोग र सौन्दर्य सम्बन्धी उपचार हुन्छ । मानिसहरु छालाको सुन्दरतालाई लिएर संवेदनशील हुन्छन् । बाहिरी सुन्दरतालाई आकर्षण बनाउने उद्देश्यले सञ्चालित ‘हेयर एण्ड डर्मा केयर प्रालि’ अहिले अधिकांशको रोजाइमा पर्ने गरेको प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक डा. मनोज चिमरीयाले बताए ।
हेयर एण्ड डर्मा केयर प्रालिमा उच्चस्तरीय प्रविधियुक्त सौन्दर्य ल्याब, छालाको परीक्षण गरी आवश्यकता अनुसारका सौन्दर्य सामान उपलब्ध गराइन्छ । अत्याधुनिक मेसिनद्वारा छालाको जाँच गरिने डा. चिमरीयाले बताए ।
पूर्वमा नै छाला ताथ सौन्दर्यमा आफूले प्रदान गरेको सेवा सबैभन्दा प्रविधियुक्त रहेको दाबी चिमरीया गर्छन् । एचडीमा छालाका सबै किसिमका समस्याको समधान हुनुका साथै ट्याटु तथा जन्मदाग हटाइने सञ्चालक चिमरीया बताउँछन् । चाँया, पोतो, डण्डिफोर जस्ता अनुहारका समस्याको सफल उपचार गर्ने उनले बताए ।
“हामी चाहे अनुसारको आकर्षक शरीर पनि बनाउन सक्छौँ” उनले भने, “ओठ, आँखा, चिउडो, नाक, ब्रेष्ट, हिपको आकार मिलाउन सकिने छ । पेट तथा शरीरको बोसोसमेत घटाउन मिल्छ ।” प्रालिमा ब्रेष्ट र हीपको साइज घटाउने बढाउने, प्लास्टिक सर्जरीसमेत गरिन्छ ।
युवा पुस्ता आकर्षक बन्न चाहान्छ
हरेक मानिस सुन्दर बन्न चाहान्छ । त्यसमा पनि “अहिलेको पुस्ता आफ्नो शरीर आकर्षक होस् भन्ने चाहान्छ । सौन्दर्यमा खोट आएमा तनावमा उत्पन्न हुन्छ” चिमरीयाले भन्छन्, “यस विषयलाई मनन् गरेर हेयर एण्ड डर्मा केयर प्रालि सञ्चालनमा ल्याइएका हौँ ।”
मानिसलाई सुन्दर र आकर्षक बनाउँन छालाको महत्वपूर्ण भूमिका छ । विशेष गरि अनुहार, घाँटी, हात, खुट्टाको छाला बाहिर देखिने हुँदा त्यो मानिसको व्यक्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसैले मानिसहरु छालाको सुन्दरतालाई लिएर संवेदनशील हुन्छन् । प्रालिमा सौन्दर्य र कपालसँग समस्या भएका मानिस बढी आउने गरेका छन् ।
सौन्दर्य र छालासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न सरसफाइमा समेत विषेष ध्यान दिनु पर्ने डा. चिमरीयाले बताए । प्रालिमा एक पटक सेवा लिन आउने ‘प्यासेन्ट’ कै रेफरमा अरु प्यासेन्ट आउने गरेको जनाइएको छ ।
‘पहिलो कपाल प्रत्यारोपण मेला’मा कपाल प्रत्यारोपण गरेका झापा मेचीनगरका शिशिर चम्लागाईँ प्रालिको सेवाप्रति सन्तुष्ट रहेको बताउँछन् । “कपाल झर्न थालेपछि उपचार र रोकथामका लागि मैलै विभिन्न प्रकारका औषधिको प्रयोग गरे” चम्लागाईँले भने, “अहिले प्रत्यारोपण पछि भने ढुक्क छु ।” “पहिले जसरी नै कपाल पलाउँछ होला भन्ने आश हराएको थियो” उनी भन्छन्, “प्रत्यारोपण पछि कपाल पलाएको छ ।”